काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकमाथि सांघातिक आक्रमण , प्रहरी भन्छ :- थाहा छैन ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकमाथि सांघातिक आक्रमण , प्रहरी भन्छ :- थाहा छैन !
प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार ०८:१६
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सुरक्षा कारवाही बढाइरहेको बेला सोमबार बिहान करिब २ बजेको समयमा काठमाडौंमा एउटा ठूलो घटना घटेको छ ।
काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाएर जीबिका चलाउदै आएका एक चालकमाथि सोमबार बिहान अपरिचित व्यक्तिहरूले सांघातिक आक्रमण गरेका छन् ।
आक्रमण भएको खबर थाहा पाउनसाथ पत्रकारहरूको एउटा टोली घटनास्थल पुगेको थियो । सो घटनाको वियषयमा उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सानु पूर्वछाने मगर र आर्थिक विभागका उपाध्यक्ष नविना खड्कासँग उक्त घटनाको विषयमा गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
कसरी घटना घट्यो ?
गोरखा जिल्ला घर भएका २७ बर्षीय ट्याक्सी चालक हुन् बुद्धिबहादुर तामाङ । उनी मिर्मिरे बिहानको उज्योलोेसंगै यात्रुको पखाईमा रहेका थिए । त्यहि समयमा एक अपरिचित ब्यक्तिले ठमेलको सञ्चयकोष अगाडिबाट मिटरमा जान अनुरोध गरे । चालकले उनलाई दरबारमार्ग हुदै चाबहिल पुर्याए । त्यहिबाट ट्याक्सीमा रहेका ब्यक्तिले साथीलाई पनि लानुछ भनेर अर्का एक जना ब्यक्तिलाई पनि चढाए । अनि जोरपाटी हँुदै अत्तरखेल जान भनियो र गाडीभित्रै चालकलाई आक्रमण गरियो ।
सुरक्षा निकायको भुमिका के ?
दैनिक जसो ट्याक्सी चलाएरै आफ्नो जिविका चलाउदै आएका बुद्धि तामाङलाई अज्ञात समुहले आक्रमण गरेपछि उनलाई मरणासन्न अवस्थामा छाडेर भागे लगतै प्रत्यक्षदर्शीले बौद्ध प्रहरी बिटलाई खबर गरेका थिए । सुरक्षा निकाय तत्काल घटनास्थल जान नमान्नुमा कुनैे सेटिङ पो थियो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएकाे छ । प्रहरीको काम सुरक्षा दिने तर नेकपाको दुइतिहाइ बहुमत भएको बर्तमान ओली सरकारले विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्द र चलाइरहेको कारवाहीका बेला एकाबिहानै ट्याक्सी चालकमाथि आक्रामण हुनुले सुरक्षा दिने प्रहरीमाथि स्थानियको शंका व्यक्त गरेका छन् । वौद्ध प्रहरी बिट यस विषयमा बोल्न चाहेन । हामीले यो विषयमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्न गर्दा भन्छन्, हामी प्रकृयामा छौ, अनुसन्धान गर्छौ अनि मात्र सार्वजनिक हुन्छ । को हो त ? अपराधिक व्यक्ति ?
घटनास्थलमा पुलिस निकै ढिलो पुगेपछि घाइते तामाङका आफन्तले नै उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याए । अहिले उनको उपचार मेडिसिटी अस्पतालमा भैइरहेको छ ।उनलाई ट्याक्सीमै चढेका अपरिचित व्यक्तिहरुले कुटपिट गरेर भागेपछि उनी अब आफू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै हारगुहार गर्दै कराइरहेका थिए ।
नजिक भएका प्रत्यक्षदर्शी र आफन्तको सहयोगमा उनलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पताल पुर्याउदा पनि उनको जिउ रगताम्य थियो । गलबन्धीले मुख थुनेर गाडीभित्र करिब ३ जनाको समुहमा आएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको तामाङ बताउछन् ।
अन्य ट्राक्सी चालक के भन्छन ?
घटना एकदमै शंकास्पद रुपमा भएको छ । मिटरमा जाम भन्नु, ठाउँ ठाउँमा मान्छे चढाउनु फेरि गाडीको भाडा देउ भन्दा चालकलाई उल्टै कुट्नु अनि यो घटना यसरी शृंखलाबद्ध तरिकाले भयो प्रहरी ढिला आउनु अनि गाडी साइट लगाउनु भन्नुले घटनाको मतलव नगर्नुले ट्याक्सी चालक भन्छन, सुरक्षा भएन सरकारले सम्पूर्ण ट्याक्सी चालकलाई सुरक्षा दिन सकेन । हिजोका दिनमा पनि यस्ता घटना घटेका छन् । तर न्याय मिलेको छैन । घटनाको निष्पक्ष छानविन हुन जरुरी छ ।
समय सान्दर्भिक भाडादर र सामाजिक सुरक्षा नहुँदा अहिले पनि ट्याक्सी चालकहरु समस्यामा परेका छन् । रातदिन जहाँ जसरी काम गर्दा नि सुरक्षित भइनेथियो तर सुरक्षा नहुँदा पनि समस्या त्यस्तै छ । ट्याक्सी चालकहरुको मागमा राज्य नै मौन भएको देखिएको छ । चालक भन्छन् राज्यले माग हाम्रा पुरा गर्नु पर्छ हामीले आवाज उठाउदै आएको आज १५१ दिन भएको चालकहरु बताउछन् ।
उनीहरु भन्छन्, समायोजन तरिकाले माग पुरा हुनु पर्छ । समिति र संघलाई रुट परमिट दिने र ११ हजार ३ सय ८५ ट्याक्सी काठमाडौंमा छन् । तै पनि आफुलाई रुट परमिट नदिएको भन्दै उनीहरु लामो समयदेखि आन्दोलन गदै आएका छन् । माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
#वौद्ध प्रहरी बिट